Qaramada Midoobay oo shaacisay tirada dadka ku barakacay Fatahaadii Baladweyne iyo Jowhar | Hiilnews
Home TOP NEWS Qaramada Midoobay oo shaacisay tirada dadka ku barakacay Fatahaadii Baladweyne iyo...
Qaramada Midoobay oo shaacisay tirada dadka ku barakacay Fatahaadii Baladweyne iyo Jowhar
Daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo dhowaan ka da’ay guud ahaan Soomaaliya ayaa saameeyay dad lagu qiyaasay 400,000 oo ku nool 14 degmo tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil, sida ay sheegtay hay’adda gargaarka ee Qaramada Midoobay.
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwaha ee Arrimaha Bani’aadamnimada (OCHA), ayaa sheegay, in Ilaa 101,300 oo qof oo ka mid ah dadkii ay dhibaatadu saameysey ay ka barokaceen guryahooda.
“Dadka ugu badan ee ay dhibaatadu saameysey waxay ku sugan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo daadadka degmada Jowhar ay ka barokiciyeen 66,000 oo qof oo ka yimid 27 tuulo, baabi’iyayna in ka badan 40,000 hektar oo dhul beereed ah, sidoo kalena waxay fatahaada albaabada u laabeen 11 dugsi oo ay waxyeello u geysteen boqolkiiba 82 kaabayaashii dhaqaalaha, iyo nadaafada, ,” OCHA ayaa ku tiri warbixinteeda daadadka.
Hadalkan ayaa yimid maalmo kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in dowladdu ay la imaan doonto istiraatiijiyad lagu yareynayo xalna loogu raadinayo daadadka joogtada ah ee dalka ka dhaca.
Rooble, oo booqday meelaha ay daadadku ku dhufteen ee gobolka shabeeladda dhexe, ayaa sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay xaalad bani’aadamnimo oo aad u xun oo ka jirta Jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran. Illaa iyo hadda, 25 qof ayaa ku dhimatay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay dhowr meelood oo Soomaaliya ah.
Magaalada Beledweyne, daadad ka dhashay fatahaadda webiga ayaa barakiciyay ku dhowaad 22,000 oo qof waxayna baabi’iyeen 1,235 hektar oo dhul beereed ah, sida ay sheegtay OCHA.
Previous articleFaah faahin ku saabsan weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
Olole nadaafadeed oo laga sameeyay qeybo ka mid ah Baladweyne
Golaha Kacdoonka Hiiraan oo digniin u diray Raysal wasaare Rooble
Victoria oo kaalmo u ballanqaaday ganacsiga ay saameysay xayiraadda COVID-19
Wakaalada wararka Hiilnews
© Hiilnews 2016 - 2021